ကားအင်ဂျင်တုန်ခါမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ လူသိနည်းတဲ့ တရားခံ
ဟိုးတလောလေးက ကားလေးတစ်စီး အင်ဂျင်တုန်လို့ (Engine Check Light) ချက်မီးလင်းလို့ဆိုပြီး ကျနော်တို့ ဝပ်ရှော့ကို ရောက်လာတယ်။ ကားကို Diagnostic စက်နဲ့ထိုးစစ်ကြည့်ပြီး ကားပိုင်ရှင်ကိုဘာတွေလုပ်ထားသေးလဲ မေးလိုက်တော့ ကားပိုင်ရှင်က
“ဒီကိုမလာခင်အင်ဂျင်တုန်နေလို့ အခြားဝပ်ရှော့တစ်ခုမှာ အင်ဂျင် tuning ပိုင်းလုပ်ထားတယ်။ လုပ်ပြီးလည်း အင်ဂျင်တုန်တာက မပျောက်သွားဘူး။ အဲဒီတုန်းက Engine Check Light (အင်ဂျင်ချက်မီး) လည်း မလင်းသေးဘူး။ နောက် Engine Check Light ပါလင်းလာလို့ ဒီကိုလာစစ်တာပါ”
ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ ကျနော်လည်း အခုကျနော်တို့စစ်ကြည့်လိုက်တော့ပြတဲ့အဓိကပြဿနာက EGR Valve ပါ။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီ EGR Valve ကိုဖြုတ်ပြီး စစ်ဆေးကြည့်ရမယ်။ မကောင်းရင် လဲရမယ်လို့ရှင်းပြရပါတယ်။
ကျနော်တို့လက်ရှိ ကားတွေမှာသုံးနေတဲ့ Internal Combustion Engine (အတွင်းပိုင်း မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး စွမ်းအင်ရတဲ့အင်ဂျင်) တွေမှာ အင်ဂျင်တုန်ခါရခြင်းအကြောင်း မျိုးစုံရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိကအင်ဂျင်တုန်ခါရခြင်းအခြေခံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဆီ၊ လေ နဲ့ မီး အချိုးမညီမျှမှုတွေကြောင့် အင်ဂျင်တုန်ခါရတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဒီ Engine တွေပုံမှန်လည်ပတ်ဖို့ ဆီနဲ့ လေအချိုးကို 14.5:1 ဆိုပြီး အကြမ်းဖျင်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အင်ဂျင်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ပြောင်းလဲပါသေးတယ်။ ဒီ ဆီ၊ လေ၊ မီး အချိုးတွေ မမှန်တော့ရင် ဘယ်လိုအင်ဂျင်မဆိုတုန်ခါလာမှာပါ။
ဒါကြောင့် အင်ဂျင်စက်သံမမှန်ဘူး၊ အင်ဂျင်တုန်ခါတယ်၊ မူမမှန်ဘူးဆိုရင် ပထမဆုံးစစ်ဆေးရမှာက အင်ဂျင် tuning ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ Spark Plug တို့၊ Injector တို့၊ ဆီပန့်တို့၊ Ignition Coil တို့၊ Air Filter တို့ Throttle Body တို့ အစရှိတဲ့ ဆီပိုင်း၊ လေနဲ့ မီးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို လိုက်လံစစ်ဆေးရတာပါ။ အခုလည်း အဲဒီလိုစစ်ဆေးပြီးခါမှ မကောင်းဘဲ၊ အင်ဂျင်တုန်ခါပြီး နောက်ပိုင်း ချက်မီးပါလင်းလာတဲ့အထိ ရောက်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ လူသိနည်းတဲ့ EGR Valve ကြောင့်ပါ။ ဒီ EGR Valve ဆိုတာကလည်း အင်ဂျင်တုန်ခါရခြင်းအကြောင်းတွေထဲက လူသိနည်းတဲ့ တရားခံပါပဲ။
EGR Valve ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတာလဲ?
EGR ရဲ့အဓိပ္ပါယ်က Exhaust Gas Recirculation ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။ အိတ်ဇောကနေထွက်လာတဲ့ အိတ်ဇောအငွေ့တွေ ပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တကယ်ဆိုအိတ်ဇောဆိုတာ အင်ဂျင်ထဲကနေ မီးလောင်ပြီးထွက်လာတဲ့အခိုးအငွေ့တွေကိုစွန့်ပစ်တဲ့နေရာပါ။ ဒီလိုအိတ်ဇောကနေ ထွက်လာတဲ့ အခိုးအငွေ့တွေကို ဘယ်လိုပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရသလဲဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။
EGR Valve အသုံးပြုပုံ၊ အလုပ်လုပ်ပုံကိုသိဖို့ဆိုရင် သူနဲ့တွဲဖက်ပြီးအတူအလုပ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ Internal Combustion Engine တွေအကြောင်းအနည်းငယ်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ကားအင်ဂျင်တွေမှာ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ Gas ဆိုပြီး အင်ဂျင်တွေကွဲပြားပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲကွဲပြား ကွဲပြား အားလုံးဟာအတွင်းပိုင်း မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီးမှစွမ်းအင်ရတဲ့ အင်ဂျင်တွေပါပဲ။ ဒီအင်ဂျင်တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုရင်......
ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တွေမှာ အင်ဂျင်ခန်းထဲကိုလေကိုဆွဲသွင်းတယ်။ ပြီးတာနဲ့ အဲဒီလေကို Piston ကနေဖိသိပ်မယ်။ ဖိသိပ်ပြီး Pressure အများဆုံးရောက်ချိန်မှာ Injector တွေက ဆီဖြန်းပေးပြီး Spark Plug ကမီးပွားခတ်ပေးခြင်းဖြင့် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်မယ်။ မီးလောင်ပေါက်ကွဲလိုက်တာနဲ့ တွန်းကန်အားတွေဖြစ်လာပြီး ဖိသိပ်ထားတဲ့ Piston ကို နောက်ကိုပြန်ကန်ထုတ်မယ်။ အဲဒီလိုနည်းနဲ့ အင်ဂျင်ကလည်ပတ်နေတာပါ။ အဲဒီလိုမီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီးတာနဲ့ မီးလောင်ခန်းထဲက မီးလောင်သွားတဲ့ အခိုးအငွေ့တွေကိုအိတ်ဇောကနေ စွန့်ထုတ်ရပါတယ်။
ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေမှာဆိုရင်လည်း ဓာတ်ဆီနည်းတူ လေကိုဆွဲသွင်းမယ်။ လေကို ဖိကျစ်မယ်၊ လေကို ဖိကျစ်လိုက်တော့ လေဟာဖိသိပ်ခံရပြီး အပူချိန်မြင့်တက်လာမယ်၊ အဲဒီလိုမြင့်တက်လာတဲ့အချိန် Nozzle ကနေ ဆီအမှုန်လေးတွေ ထဖြန်းလိုက်တော့ မီးထလောင်ပေါက်ကွဲမယ်။ Piston ကိုပြန်လည်တွန်းချမယ်။ အင်ဂျင်လည်ပတ်မယ်ပေါ့။ ဒီနည်းနဲ့ အင်ဂျင်လည်ပတ်ပါတယ်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေမှာတော့ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်လို Spark Plug မပါပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မီးလောင်ခန်းထဲကမီးလောင်သွားတဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေကိုတော့ အိတ်ဇောကနေတစ်ဆင့် စွန့်ထုတ်ရပါတယ်။
ဒီ EGR ဆိုတဲ့ Valve က အိတ်ဇောကနေထွက်လာတဲ့ အိတ်ဇောငွေ့တွေထဲက ရာခိုင်နှုန်းတချို့ကို အင်ဂျင်ရဲ့ လေဆွဲသွင်းတဲ့ Inlet ထဲကို ပြန်လည်ထည့်ပေးတဲ့နေရာမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အဖွင့်အပိတ် Valve လေးတစ်ခုပါ။
Exhaust ငွေ့တွေကို ဘာလို့ Inlet ထဲကိုထည့်သွင်းတာလဲ?
EGR Valve ကို အသုံးပြုပြီး ဘာလို့အိတ်ဇောငွေ့တွေကို Inlet ထဲပြန်ထည့်တာလဲဆိုရင်တော့ လေထုညစ်ညမ်းမှု ဥပဒေတွေကြောင့်ပါ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ဒီလိုဥပဒေတွေကအားနည်းပေမဲ့ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတိုင်းမှာ ကားထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေက ကားတွေရဲ့အိတ်ဇောကနေထွက်လာတဲ့ အခိုးအငွေ့တွေရဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှု ဘယ်လောက်ပမာဏရှိသလဲ တိုင်းတာပါတယ်။ လေထုညစ်ညမ်းမှု ပမာဏမြင့်တဲ့ကားတွေကို ကန့်သတ်ဥပဒေတွေထုတ်တားမြစ်တာ၊ ဒဏ်ရိုက်တာတွေ လုပ်ပါတယ်။ EGR Valve ကိုစတင်တီထွင်သုံးစွဲခဲ့တာကတော့ General Motor ဖြစ်ပြီး 1970 ခုနှစ်လောက်မှာ စတင်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် EGR Valve ရဲ့အဓိကတာဝန်က လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့ Emission Control Valve တစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။
EGR Valve တွေဟာ အိတ်ဇောကနေထွက်လာတဲ့ အိတ်ဇောအငွေ့တွေရဲ့ 15% ကနေ 35 % လောက်ကိုပဲ Inlet အထဲသို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးတာပါ။ ဘာကြောင့် အိတ်ဇောအငွေ့တွေကို Inlet ထဲပြန်ထည့်တာလဲဆိုရင်တော့ အိတ်ဇောကနေထွက်လာတဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ NOx ဆိုတဲ့ Nitrogen Oxide ဓာတ်ပေါင်းတွေကို အဓိကလျော့ကျသွားအောင်လုပ်ချင်လို့ပါ။
NOx တွေကဘယ်လိုအချိန်မှာအများဆုံးထွက်ပေါ်တတ်သလဲဆိုရင်တော့ လေထုထဲကနေတစ်ဆင့် Inlet ထဲကို ပါလာတဲ့လေထဲက အောက်ဆီဂျင်တွေကိုဖိသိပ်မှု အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ မီးလောင်ပေါက်ကွဲသွားရင် NOx ဆိုတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေအများဆုံးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် မီးလောင်ပြီးသားဓာတ်ငွေ့တွေကို အိတ်ဇောကနေ EGR Valve ကိုသုံးပြီး Inlet ထဲကနေ တစ်ဆင့် မီးလောင်ခန်းထဲပို့လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခိုးအငွေ့တွေထဲမှာပါတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေဟာ မီးလောင်ပြီးသားမို့ ထပ်မလောင်ကျွမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုမလောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်တွေနဲ့ ပြင်ပလေသန့်သန့်ကနေပါလာတဲ့ အောက်ဆီဂျင်တွေရောနှောသွားတာကြောင့် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါ ပုံမှန်ထက် NOx ဓာတ်ငွေ့ထွက်ပေါ်လာမှုလျော့နည်းသွားပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ NOx ဓာတ်ငွေ့တွေလျော့ကျစေပြီး လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်ပေးတာပါခင်ဗျာ။
တစ်ခုထပ်ပြောစရာရှိတာက EGR Valve ကိုသုံးတဲ့အခါ အင်ဂျင်ရဲ့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကို ပုံမှန်ထက်လျော့ကျစေတာမို့လို့ အင်ဂျင်အဆွဲအရုန်းလျော့ကျစေပါတယ်။
EGR Valve ရဲ့ အားသာချက်/အားနည်းချက်များ
ဟိုးအရင် EGR Valve တွေကိုတော့ လေဆွဲစနစ်သုံး အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပြီး အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်မီ EGR Valve တွေကိုတော့ ထောင့်ဒီဂရီအမျိုးမျိုးအဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်တဲ့ Stepper Motor တွေကိုကား ECU ဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာဘောက်ကနေ ထိန်းချုပ်စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အခုခေတ် EGR Valve တွေရဲ့အဖွင့်အပိတ်ကိုတော့ အင်ဂျင်အပူချိန်၊ လေအပူချိန်၊ အင်ဂျင်လည်ပတ်နှုန်း၊ အင်ဂျင်ရဲ့ဝန်ရုံးအား အစရှိတဲ့အမျိုးမျိုးသော အာရုံစနစ်တွေကို အာရုံခံတွက်ချက်ပြီးမှ ကွန်ပျူဘောက်ကနေထိန်းချုပ်အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပေးပါတယ်။
EGR Valve ကိုသုံးတဲ့အတွက် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။
အပေါ်မှာပြောထားသလို အဓိကအားသာချက်ဖြစ်တဲ့ NOx Emission Control ကိုအတိုင်းအတာ တခုအထိ ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကောင်းပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က EGR ကနေအိတ်ဇောငွေ့တွေကို Inlet ထဲပြန်ထည့်သွင်းတဲ့အခါ ပြင်ပကဝင်လာတဲ့ Fresh Air တွေနဲ့အတူ မီးလောင်ကျွမ်းပြီးသား Oxygen တွေလည်း ပြန်လည်ပါဝင်သွားပါတယ်။ အဲဒီကောင်တွေက မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အခါ ထပ်မံမီးမလောင်ကျွမ်းတော့တဲ့အတွက် Combustion Chamber အတွင်းမှာ အပူချိန်မြင့်တက်မှုကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။
နောက် ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေမှာဆိုရင် ပြင်ပက လေကို ပူအောင်ဖိသိပ်ပြီးမှ မီးလောင်ကျွမ်းအောင် ပြုလုပ်ရတာမို့ EGR Valve ကနေ တစ်ဆင့် Inlet ထဲ ပြန်ဝင်လာတဲ့ ပူနွေးပြီးသား လေတွေကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ် နှောင့်နှေးမှုတွေကို သက်သာစေပြီး လွယ်လွယ်ကူကူမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စေပါတယ် ။
အားနည်းချက်အနေနဲ့ကတော့ ပုံမှန် မီးမလောင်ကျွမ်းရသေးတဲ့ လေတွေထဲမှာ၊ မီးလောင်ပြီးသား လေတွေရောနှောဝင်ရောက်လာတာမို့လို့ အကုန်မီးမလောင်ကျွမ်းနိုင်ဘဲ အင်ဂျင်ရဲ့ Performance ကိုလျော့ကျစေပါတယ် ။
EGR Valve ဆိုတာ အိတ်ဇောက အခိုးအငွေ့တွေကို Inlet အဝင်ပေါက်ထဲ ပြန်လည်ထည့်သွင်းလို့ရအောင် အပိတ်အဖွင့်လုပ်ပေးရတဲ့ ဗားဖြစ်တာမို့၊ ဆီမသန့်ရှင်းတဲ့အခါ၊ အင်ဂျင်ခန်းထဲ မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ် မညီညွတ်ဘဲ မီးခိုးအငွေ့တွေများတဲ့အခါ၊ အလွယ်တကူ ကြေးပိတ်ပြီး ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။
EGR Valve တွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါ
EGR Valve တွေဟာ အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး ထွက်လာတဲ့ အိတ်ဇောအငွေ့တွေကို ဖြတ်သန်းသွားဖို့ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပေးရတဲ့ ဗားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် သက်တမ်းတစ်ခု ကြာလာတာနဲ့ အမျှ အိတ်ဇောဂျိုးတွေပိတ် ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
EGR Valve တွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါ၊ အလုပ်မလုပ်တဲ့အခါ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အင်ဂျင်ပြဿနာတွေက ၂ ပိုင်းကွဲပါတယ်။ ပုံမှန် ဖွင့်လိုက်၊ ပိတ်လိုက်နဲ့ ကစားနေတဲ့ EGR Valve ဟာ
EGR Valve ဖွင့်နေတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပျက်သွားတာဆိုရင်
အင်ဂျင်စနှိုးလိုက်တဲ့ အခြေအနေမှာ စက်သံ တအားကြမ်းမယ်။
အင်ဂျင် Slow အခြေအနေ (idle) မှာ အင်ဂျင်တုန်တာတွေ၊ စက်ထိုးရပ်တာတွေ ဖြစ်မယ်။
အင်ဂျင် ချက်မီးလင်းမယ်၊ တချို့ကားတွေမှာဆို အင်ဂျင်ချက်မီးခုန်လာမယ်။
EGR Valve ပိတ်နေတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပျက်သွားတာဆိုရင်
Engine ထဲကနေ မီးသံခေါက်လာမယ်။
အင်ဂျင် Slow အခြေအနေ (Idle) မှာ မလိုအပ်ဘဲ အင်ဂျင် တအားရုန်းနေမယ်။
အင်ဂျင်ချက်မီးလင်းမယ် ၊ အင်ဂျင်ချက်မီးခုန်လာမယ်။
အစရှိတဲ့ အင်ဂျင်တုန်ခါတာ၊ အင်ဂျင်သံကြမ်းတာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မူမမှန်မှုတွေဖြစ်လာပြီး Check မီးလင်းလို့ Diagnosis Codes တွေတက်လာရင်လည်း EGR Valve နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Trouble Codes တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို အင်ဂျင်တုန်ခါရခြင်း အကြောင်းအရင်းတွေအများကြီးထဲကမှ EGR Valve ကြောင့် အင်ဂျင်တုန်ခါမှုဖြစ်စဉ်ဟာ အဖြစ်နည်းပြီး လူသိနည်းလှတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ နောက်တစ်ခုက တော်တော်များများ EGR Valve နဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူမှားနေတာလေးတစ်ခုက EGR Valve တပ်ဆင်ထားရင် အဆွဲအရုန်းကောင်းတယ်။ EGR Valve ဟာ အဆွဲအရုန်းကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာ မှားပါတယ်။ EGR Valve ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်က Emission Control ဖြစ်ပြီး Green Technology လို့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ ဒီလို လေထုကို သန့်စင်အောင်ကူညီပေးနေတဲ့ EGR Valve လေးပျက်စီးသွားရင်တော့ ဖြုတ်တန်ဖြုတ်၊ ဆေးကြောတန်ဆေးကြော၊ အသစ်လဲလှယ်ဖို့ လိုအပ်ရင် လဲလှယ်တာတွေ လုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေတို့လည်း အင်ဂျင်တုန်လို့ ဆီစစ်၊ လေစစ်၊ မီးစစ် စတဲ့ Tuning ပိုင်းလုပ်တာ အကုန်စုံပြီး ကားတုန်တာ မကောင်းသေးဘူးဆိုရင်ဖြင့် ကားမှာပါတဲ့ EGR Valve လေးစစ်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတာ သတိရပေးကြပါခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေ ညီအစ်ကို မောင်နှမ အားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတ ကြွယ်ဝကြပါစေ။